Sawirro: Ciidamo loogu magacdaray Onkod oo howl bilaabay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Shalay waxaa magaalada Muqdisho ka howl bilaabay ciidamo loogu magacdaray ONKOD, kuwaasoo sugaya amaanka qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho.
Afhayeenka wasaaradda Amniga Soomaaliya, Maxamed Yuusuf Cusmaan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamadan cusub ay sugi doonaan amaanka goobaha muhiimka ah ee Muqdisho.
Maxamed Cusmaan ayaa shacabka ugu baaqay iney la shaqeeyaan ciidamadaas, isagoo dhanka kala ka codsaday mas’uuliyiinta dowladda ee hubka wata iney isu dabciyaan ciidamadaas oo baaraya dhamaan gaadiidka hubka sita.
Kor ka daawo sawirrada ciidamada cusub ee shalay ka howl bilaabay Muqdisho.